Daraasad 'talo muhiim ah' kasoo saartay shahwada ragga geeriyooday - BBC News Somali
Daraasad 'talo muhiim ah' kasoo saartay shahwada ragga geeriyooday
Daraasad laga soo saaray UK ayaa ku talisay in la oggolaado ku deeqista shahwada laga qaado ragga geeriyooday.
Khubarada sameeyay cilmibaaristan, oo lagu daabacay wargeyska arrimaha caafimaadka, ayaa sheegay in deeqaha lagu bixiyo xubnaha iyo unugyada taranka ee dadka geeriyooday ay wax weyn kusoo kordhinayaan dadweynaha.
Sanadkii 2017-kii, UK waxaa ku dhalatay 2,345 carruur ah oo ka abuurmay shahwo lagu deeqay.
Hase ahaatee, waxaa marba marka ka dambeysa sii yaraanaya deeqda noocaas ah ee waddanka laga helo, sababo la xiriira shuruucda loo maro oo aad u adag.
Shahwada ragga ayaa laga qaadi karaa marka ay dhintaan ka dib, iyadoo lagu qaadi karo habab kala duwan, sida in koronto la adeegsado ama qalliin lagu sameeyo.
Marka la qaado ka dib ayaa la keydin karaa, waxayna khubarada seyniska aaminsan yihiin in ay shaqeyn karto.
Caddeyn lagu helay daraasadda ayaa muujineysa in shahwo laga soo saaray nin nintay, xitaa 48 saacadood ka dib geeridiisa, ay wali unugyadeeda noolaan karaan, haweeneydii lagu tallaalana ay uur ku qaadi karto, sidoo kalena dhali karto ilmo caafimaad qaba.
Intii ay socotay falanqeynta, Dr Nathan Hodson, oo ka tirsan jaamacadda Leicester iyo Dr Joshua Parker, oo ka socda isbitaalka Wythenshawe ee magaalada Manchester, ayaa ku dooday in arrinta shahwada laga qaado ragga dhintay ay la mid tahay xubnaha kale ee deeq ahaanta loo bixiyo.
"Haddii niyad ahaan loo aqbali karo in shakhsiyaadka ay ku deeqi karaan xubnahooda muhiimka ah si loogu tallaalo 'dad kale oo noloshooda ugu baahan' ama ay cudurro ku dhaceen, uma jeedno wax sabab ah oo aan loo sii ballaarin karin deeqaha noocaas ah, looguna xoojin karin", ayey ku dhaheen dooddooda.
"Hase ahaatee, waxaa ka dhalan kara su'aalo badan oo la xiriira dhinaca qoysaska, waxaana jira walaac ku aaddan sida loo qarin karo aqoonsiga qofka deeqda bixiyay", ayey sii raaciyeen hadalkooda.
Sanadkii 2014-kii, bangi qaran oo lagu keydiyo shahwada, kana howlgalaya UK ayaa laga furay magaalada Birmingham, dowladda ayaana siisay lacag dhan £77,000.
Wax ka yar labo sano ka dib, bangigaas ayaa albaabbada xirtay, wuxuuna joojiyay qabashada deeqaha. Sagaal qof oo kaliya ayaa iska diiwaan galisay bangigaas, kuwaasoo mid ka mid ahna uu goor dambe ka laabtay go'aankiisa.
Tan iyo sanadkii 2005-tii, sharciga waddanka ayaa dhigaya in dadka shahwadooda ku deeqa ee UK ay ku khasban yihiin inay aqbalaan xeer ah inay carruurta ku dhasha deeqdooda la soo xiriiri karaan marka ay da'doodu gaarto 18 sano.
'In loollan la galiyo fikirka horay loo qabay'
Nin horay deeqdaas u bixiyay, oo lagu magacaabo Jeffrey Ingold, kana soo jeeda magaalada London, ayaa BBC-da u sheegay inuu aaminsan yahay in oggolaanshaha shahwada la bixiyo geerida ka dib ay rag badan ku qancin lahayd inay deeq bixiyeyaal noqdaan.
"Iima muuqdo wax ka fiican in la soo jeediyo nidaam deeqda shahwada ka dhigaya mid la mid ah xubnaha kale ee lagu deeqo", ayuu yiri.
Image caption Jeffrey Ingold wuxuu aaminsan yahay in macluumaadka been abuurka ah ee la faafiyo ay rag badan ka hor istaagtay inay deeq bixiyaan
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: "Aniga ahaan inaan shahwadeyda deeq ahaan u bixiyo igama ahayn inaan carruurta ka dhalaneysa daneeyo, laakiin ujeeddadeydu waxay ahayd inaan caawiyo saaxiibbada u baahan".
"Waxaa kale oo ay ila tahay in qaabkan loollan lagu galin karo fikradda ay bulshada ka qabto ku deeqista shahwada".
Tusaale ku saabsan dhinaca sharciga
Sanadkii 1997-kii, haweeney ayaa ku guuleysatay xaqa ay u leedahay in loo oggolaado go'aan ay ku dooneysay in shahwo looga qaado ninkeeda oo geeriyooday.
Stephen Blood ayuu cudur madax xanuun daran ah ku dhacay bishii February ee sanadkii 1995-kii, labo bilood ka dib markii uu billaabay isku dayga ah inuu qoys la yagleelo xaaskiisa Diane.
Wuxuu kooma galay, uuna geeriyooday ka hor inta uusan hab qoraal ah ku oggolaanin heshiis ku saabsanaa in shahwadiisa la isticmaalo, inkastoo markii hore codsigiisa looga qaaday labo tijaabo oo shahwo ah.
Sanadku markii uu ahaa 1990-kii, sharciga taranka bani'aadanka ayaa Mrs Blood ka mamnuucayay inay shahwada seygeeda isticmaasho isagoo aan laga heynin ogolaansho qoraal ah.
Hase ahaatee, maxkamadda racfaanka ayaa markii dambe xukuntay in Mrs Blood loo ogolaado inay tarankeeda ku sameysato Yurub, laakiin aysan ku sameynin gudaha UK.
Mrs Blood ayaa sanadkii 2002-dii dhashay wiil ay ku magacowday Joel - kaasoo uurkiisa ay ku yeelatay markii lagu tallaalay shahwadii la keydiyay ee seygeeda.
Sanadkii xigayna waxay ku guuleystay kiis maxkamadeed oo ay ku dooneysay in cunugeedda aabihiis loo aqoonsado seygeedii geeriyooday.